मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यपहिलो डोज लगाएको खोपकै दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने
विराटनगर / नेपालमा हाल दुई प्रकारका कोरोना भाइरसविरुद्धका खोप वितरण भइरहेको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्ध भारतमा उत्पादित अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाको ‘कोभिशिल्ड’ र चीनको ‘भेरो सेल’ खोप दिइँदै छ । कोभिशिल्ड र भेरो सेल फरक किसिमका खोप हुन् । कोभिशिल्ड पुनः संयोजित खोप हो भने भेरो सेल निस्क्रिय पारिएको भाइरस निर्मित खोप हो । यी दुवै खोपको समय अन्तरालमा दुई मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोभिशिल्डको पहिलो डोज लगाएको आठदेखि १२ हप्ताभित्रमा दोस्रो डोज लिइसक्नुपर्ने हुन्छ भने भेरो सेलका दुई मात्रा चार हप्ताको अन्तरालमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये कुनै एक खोपको पहिलो मात्रा प्राप्त गरेका व्यक्तिले सोही खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पहिलो मात्रा कोभिशिल्ड लगाएकाले दोस्रो मात्रा पनि कोभिशिल्ड लगाउनुपर्ने र पहिलो मात्रामा भेरो सेल लगाएकाले दोस्रो मात्रामा भेरो सेल नै लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
दुई खोप मिसाउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अध्ययन भइरहेको छ जसकारण खोप मिसाएर लगाउँदा के हुने थाहा नभएको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमाल बताउँछन् । खोपसम्बन्धी विज्ञ समूहका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार हालसम्म कोभिडको एक प्रकारको खोप लगाएपछि अर्को खोप दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ ।
हरेक खोपको उद्देश्य एन्टीबडी वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो । तर, पूर्ण रूपमा जानकारी नभएको हुँदा हालसम्म दुई खोप मिसाएर लगाउन भनिएको छैन ।